Imibhalo kaTravis Smith mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge U-Travis Smith
Umculi nombonisi uNick Dewar udlule emhlabeni kuleli sonto. Usebenzele izinkampani eziningi ezahlukahlukene kusuka kuThe Atlantic Monthly to Random House, enikeza imifanekiso eqondisisa amagama athokozisayo endatshaneni noma encwadini. Umsebenzi wami engiwuthanda kakhulu uNick Dewar ukhombisa ifilosofi yami yobungcweti neyami uqobo: Ukwenza izinto zibe lula kuyisihluthulelo sokuphila ngempumelelo. Lokhu ukuphinda kuchazwe ngobungcweti nangokucacile kwesikhathi esivivinywe indlela ye-KISS: Cha, hhayi lokho I-KISS - Isimiso se-KISS
Ocingweni lwakamuva lwenkampani enkulu yezokuxhumana, engingeke ngiyisho (uphawu lwayo lubukeka njengenkanyezi yokufa okuluhlaza okwesibhakabhaka), bengithathekile ngummeli wami wamakhasimende? kuyashaqisa, ngiyazi. Kuwo wonke amakholi abhale lokho ebengikufuna, futhi washo izinto ezinjengokuthi, “lesi yisivumelwano amakhasimende ami amaningi asithandayo”, futhi “ake ngikhulume nomphathi ukuze asenzele isivumelwano esingcono”, futhi “Ngiyakuqonda ukukhungatheka kwakho,
NgoLwesihlanu, Novemba 20, 2009 NgoMgqibelo, Septhemba 7, 2013 U-Travis Smith
Uma ungungoti ebhizinisini lakho, wazi ngaphezu kwanoma ngubani ngalokho okwenzayo nangemininingwane yomkhiqizo wakho. Umkhiqizo wakho, ngendlela, ungaba insizakalo, iwebhusayithi, noma okuhle okubonakalayo. Noma yini eyakha umkhiqizo wakho, ungabona ubuchwepheshe bakho nobuhlakani bakho kuzo zonke izingxenye zawo. Inkinga? amakhasimende akho awakwazi. Amakhasimende adinga ukuqedela umsebenzi ngomkhiqizo wakho ukuze nawo